Ụbọchị My Pet » Atọ Atụmatụ maka Online dịwara Ịga nke Ọma
emelitere ikpeazụ: Jul. 07 2020 | 3 min agụ
New na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idaha? Ọfọn, kwere na ya ma ọ bụ, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ dị nnọọ ka mpi, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ndị ọzọ mere, ka omenala mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ekwela ka nke ahụ kụda gị mmụọ, Otú ọ dị. Ọtụtụ ndị achọpụtala na a ụbọchị, ma na-alụmdi na nwunye, site online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ. E nwere Atụmatụ na azum na pụrụ inyere gị aka na-profaịlụ gị chọpụtara karịrị gị mpi. Ebe a na-atọ emeri na i nwere ike ime ihe ga enye profaịlụ gị na anya na-eche na ọ dị mkpa ka ọ na-adọta ụdị mmadụ ị ga-achọ izute.
NDỤMỌDỤ 1: Bulie Zuru okè Profile Photo
Foto gị bụ otu n'ime ihe ndị kasị eme ka na-adọrọ mmadụ profaịlụ gị. Mbụ, jide n'aka na i nwere a na-adịbeghị anya picture. N'aka na foto nke ị na bikini mgbe on mahadum oge ezumike oge ọdịda azụ na 1995 nwere ike ịbụ cute, ma mgbe gị ụbọchị osobo ị atụ anya ka ị na-ele anya dị ka i mere na mahadum, gị ụbọchị ga-emechu ihu. Nke a nwere ike ịmepụta atụkwasịghị mmadụ obi na-eme ka gị na ụbọchị na-eche na-ewe iwe na-aghọgbu. Nke a bụ mgbe a ihe ọma mgbe na-agbalị na-amalite a mmekọrịta.
Ọzọkwa, bulie a foto na-egosi na anya gị kasị mma atụmatụ. Jide n'aka na ị na-yi a enyi na enyi ọchị, ọ ga-abụ nnọọ ihe N'ụda karịa a dị oké njọ inwe ma ọ bụ, O doro anya na, a iwe. Always zere photos ebe ị bụ mmadụ na onye ọzọ, ma ọ bụ, njọ ma, i chopped onye nke ọzọ nke foto, nanị ịhapụ a omimi ogwe aka. Gị ụbọchị nwere ike mgbagwoju anya site nke onye bụ n'ezie gị ma ọ bụ na-eche onye ìmysterious armî bụ.
NDỤMỌDỤ 2: Jiri aha njirimara gị Ikpughe gị-erite
I nwere ike iche aha njirimara gị bụ nnọọ ụzọ gị abanye na gị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ, ma nke a isnít ikpe. Aha njirimara gị bụ otu n'ime ihe ndị mbụ na onye ga na-agụ banyere gị na ezi aha njirimara nwere ike ịpụta ihe dị iche n'etiti a profaịlụ echiche na a profaịlụ gafee. A nkịtị Usoro bụ gaa na omenala amaonye aha njirimara dị ka ìJenny321î ma gịnị mere uche si na a isi ohere enwetaghị someoneís ntị ma ọ bụ na-ekpughe a bit banyere onwe gị?
Mee ka gị na aha njirimara mbụ na-eme ka ọ na-ekwu a obere ihe banyere àgwà gị. Buru 'SweetSinger’ dị ka aha njirimara gị ma ọ bụrụ na gị na-enwe ntụrụndụ na-abụ ma ọ bụ ìDodgersDudeî ọ bụrụ na gị na-uchu Dodgers ofufe na-achọ ụlọ ọrụ. Gị nkọ aha njirimara ga-bụghị naanị ịkọrọ a ntakịrị banyere àgwà gị ma ọ bụ ọdịmma, ma nwekwara ike-adọta ndị mmadụ na-ahụ metụtara. Ma, kpachara anya gaghị na-ezighị ezi. Dị nnọọ n'ihi na ị na-akọwa na aha njirimara ìFunLovinî pụtara ị hụrụ n'anya nwere fun, onye ị na-elele profaịlụ gị nwere ike iche na ìFunLovinî pụtara na ị na-achọ ụfọdụ fun loviní, ọ bụrụ na ị maara ihe m chere.
NDỤMỌDỤ 3: Donít-ekwu na ọ, Gosipụta na Ọ! Na-Specific
Mgbe na-emepe emepe profaịlụ gị nkọwa, ị nwere ike iji dee ihe dị ka ìIím na-akpa ọchị na smart na a ezi uche nke humor.î Nke a bụ nanị a na-agwụ ike na ndepụta nke adjectivesÖ otu adjectives na-egosi na ọtụtụ puku ndị ọzọ profaịlụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na profaịlụ n'ezie kwụpụta, mkpa ka ị na-akọwa onwe gị ihe site nkọwa ndị doro.
Kama-asị na ị na- “na-akpa ọchị” ma ọ bụ nwere a “ezigbo omume ịkpa ọchị”, eme ka gị na profaịlụ na-akpa ọchị. Ịgbawa a di na nwunye nke atọ njakịrị ma ọ bụ ịkọrọ a na-akpa ọchị merenụ. Nke a ga-egosi na gị na-ekiri ihe ụdị ịkpa ọchị nke i nwere. Ọ bụrụ na gị nke ịkpa ọchị bụ mara mma na-ekiri, ha ga-kpọtụrụ gị. Kama naanị na-ekwu na ị bụ ìsmartî, depụta ọkacha mmasị gị akwụkwọ ma ọ bụ gị ọdịmma nke ga-egosi na gị na-ekiri otú smart na ị bụ. Nke a ga-enye gị na-ekiri ụfọdụ ihe atụ na ọ ga-enwe ike ikwu na na.
Cheta, dị nnọọ n'ihi na i nwere a profaịlụ elu, doesnít apụtachaghị ị ga-ozugbo ga-esi na-eme. Ndị a atọ Atụmatụ ga-enyere, ma egwu na na ọdịnaya nke profaịlụ gị ruo mgbe ị na-amalite na-na nsonaazụ ndị ị chọrọ. Ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-aza na gị na ndepụta nke ihe ndị metụtara, etinye ụfọdụ ndị ọhụrụ. Gbanwee foto gị ọ bụla mgbe a na mgbe ịhụ ụdị ihe omume ị na-enweta. Ka ị na-enwe na gị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ, ị ga-Olileanya na-amalite ịhụ Ibọrọ ị na-achọ.